DAAWO-Sheekh Rusheeye Yare oo Garoowe ugu yeertay reer Laascaanood & Puntland oo xarig ugu hanjabtay hadduu wax quraan saaro.
October 20, 2020 Xuseen 0
Sheekh Rusheeye Yare oo horay dadka qaab online ah quraanka kariimka ah ugu dawayn jirey ayaa dhowaan sheegay inuu booqan doono deegaamo katirsan Somaliland gaar ahaan magaalada Laascaanood.
Sheekh Cabdullaahi Cumar Cabdi (SH RUSHEEYE YARE) oo ah maamulaha xarunta Cilaajka Daarul Towba oo warfidiyeenka kula hadlay garoonka ciyaaraha Classic Garoowe ayaa sheegya inay la soo xiriireen shacab Soomaaliyeed oo kunool Laascaanood ayna u diideen horjoogayaasha Somaliland.
Waxa uu sheegay in Garoowe ay tahay magaalo loo siman yahay qof walba oo Soomaaliyeedna uu imaan karo, wuxuuna ka dalbaday dadkii la soo xiriiri jirey ee ku sugnaa bartamaha, Bariga iyo waqooyiga Soomaaliya inay yimaadaan.
Dhanka kalena, wasaaradda Awqaafta iyo arrimaha diinta Puntland ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in Sheekh Rusheeye Yare uusan wax shaqo ah ka qaban karin deegaamada Puntland, waxaana ay meesha ka saartay qorshihiisa magaalada Garoowe.
Raaf xooggan oo ka socda magaalada Garoowe & Puntland oo shacabka digniin u dirtay.
DAAWO-Boob lagu hayo hantida dowladda oo ka socda Garoowe & mas’uuliyiin lagu dheggan yahay.
DEG DEG: Madaxweynaha Puntland oo awaamiir duldhigay dhammaan hay’adaha dowladda.
Madaxweynaha Puntland oo dhagax dhigay dhismaha cisbitalka Garoowe.
Boqor Burhaan oo weerar ku qaaday xukuumadda Puntland kana horyimid tallaabo ay qaaday.
Guddoomiyaha aqalka sare oo ka horyimid go’aamadii golaha shacabka & ansixinta dhamaan..
Dowladda Soomaaliya oo aan weli furin safaaraddii Kenya iyo muwaadiniin ka cabanaya.
NISA oo Muqdisho ku xiratay mas’uul katirsan dowlad goboleedyada dalka & farriin uu soo diray.
Madaxda dowlad goboleedyada oo ku wajahan Muqdisho, arrintii Gedo oo weli taagan iyo shir furmaya
Guddiga doorashooyinka oo lagu amray inay Muqdisho ku soo xeroodaan.
Maamulka Somaliland & xukuumadda Thaiwan oo heshiis cusub kala saxiixday.
Xisbiyada UCID & Wadani oo u midoobey sidii meesha looga saari lahaa Kulmiye iyo M/weyne Biixi.
Rabshado ka dhashay natiijadii doorashada oo ka bilowday deegaamo katirsan Somaliland.
Maxay Muuse Biixi kala hadleen waftigii Midowga Yurub iyo UK ee gaarey Somaliland.